Ilay vehivavy janga lehibe an'i Harald Gustafsson | Apg29
Izy io dia ny fiangonana lavo, izay vokatra eo amin'ny sary - Kristianisma sandoka.
Roa manontolo ny Apokalypsy toko natokana ho an'ny famaritana ilay mpivaro-tena lehibe. Noho izany hahatakatra fa misy tranga lehibe, izay tsaboina ao amin'ireo toko ireo.
Harald Gustafsson dia tokantrano anarana izy sady Pentekotista pasitera any Smyrna Fiangonana in Göteborg tamin'ny 1945 - 1967 dia nanoratra ny boky mitondra ny lohateny hoe Hafatra avy amin'ny Apokalypsy. Ny iray amin'ireo boky ny toko mitondra ny lohateny hoe ilay vehivavy janga lehibe.
Ilay vehivavy janga lehibe Up. 17 ary 18
Ny rafitra manokana fa tojo ao amin'ny Apokalypsy, naharitra lava ny fotoana ananany. Toy izany koa ny amin'ny bibi-dia - ny mpanompo sampy fahefam-panjakana, ary toy izany koa ny ampakarina - ny Fiangonana - ary koa ny vehivavy janga lehibe. Tsy maintsy mahita azy ireo eo amin'ny ara-tantara manodidina. Ny fomba fijery ara-tantara no ilaina, raha tiantsika ny hahatakatra ny Apokalypsy ny sary hafahafa. Roa manontolo ny Apokalypsy toko natokana ho an'ny famaritana ilay mpivaro-tena lehibe. Noho izany hahatakatra fa misy tranga lehibe, izay tsaboina ao amin'ireo toko ireo.
Ny mpivaro-tena lehibe sy ny ampakarina Assemblée tsirairay dia ny mifanohitra tanteraka. Anglisy mpanoratra no mety tsara nanamarika ny fampifanoheran-kevitra. Ny iray maneho ny fahadiovana ihany; ny hafa dia tena maloto, fa ara-pitondrantena dia afaka hahatonga ny ny lò. Ny iray dia ny Zanak'ondry zana-borona; ny hafa dia mifandray amin'ny ratsy fanahy ny tany ny mpanjaka. Ny iray dia niakanjo akanjo fotsy lava mamirapiratra ny fahamarinana; ny faharoa eto an-tany mitarehin ny voninahitry ny volomparasy sy mena sy ny volamena. Ny iray dia ny virijina madio; ny iray dia ny renin 'ny mpijangajanga ny tany. Ny iray dia ankahalaina sy enjehina; ny hafa dia mamon'ny ran'ny olona masina. Ny ampakarina, dia hanadino ny famirapiratan'ny voninahitry ny any an-danitra; vehivavy janga hanjavona ao amin'ny maizina sy ny setroka avy amin'ny fananana ny afo mandevona azy.
Lasa ny Katolika Romana fiangonana vehivavy janga indray mandeha mpanotrona ny mpanambady apostlatidens fiangonana. Fa lao niditra ka nandrava ny fanahy exuberant fiainana. Komiberaky ny mpisorona dia tonga amin'ny farany, fa tsy ny ara-panahy sy ara-panahy fanompoana fanomezam-pahasoavana. Ary raha ny Emperora Constantin naka ny taloha fiangonana Katolika eo ambany fiahian'ny fanjakana romanina, fa efa masaka ny papa.
Nanana mpivaro-tena teny an-tànany kapoaka volamena feno zava-betaveta sy ny maloto momba ny fijangajangany. Fahavetavetana dia matetika ny anaran 'fanompoan-tsampy ao amin'ny Soratra Masina. Ary ny fanompoan-tsampy romanina papa dia tanteraka izany mpanompo sampy, araka izay afaka mahazo. Tsy fanompoan-tsampy ihany, dia hiteny ratsy an'Andriamanitra izy. Papa milaza ny toerana. Izy milaza ho solontenan'ny Kristy eto an-tany. Leo X - ny Papa izay niara-belona tamin'i Martin Luther - Nahazo fanomezam-boninahitra. Latran Nanome voninahitra ho azy tamin'izao teny izao: "izahay midera tena ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ianao no fiangonana ny vadiny, Prince ny Apôstôly, izao rehetra izao sy ny mpanjaka tompoko. Ianao ny mpiandry ondry sy ny dokotera. Andriamanitra ianao. "
Papa iray hafa, Pie IX, hoy ny tenany: "Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana"
Ny fanompoan-tsampy, izay teo ihany ny amin'ity Fiangonana ity ho toy Maria Cult sy hiankohoka ny olona masina, dia na inona na inona fa ny mpanompo sampy taloha mångguderiet, izay ny fiangonana ny mpanompo sampy nolovana tamin'i izao tontolo izao, ary avy eo nanome ny kely tinge Kristianina. Ao anatin'ny papa Maria no efa namingana samy Andriamanitra ny Ray sy i Jesoa Kristy. Mary no mpanelanelana. Eny, izy no Andriamanitra.
Fiangonana Papa ny fanompoam-pivavahana sy ny fitsaohana ny olona masina maro be no tena malaza, dia ilaina intsony ny miresaka momba azy io. Skökokyrkans kapoaka volamena feno fahavetavetana.
Ny sokay ao ihany koa ny fijangajangany fahalotoana. Tsy mikendry tsara tamin'ny voalohany azy ohatra ny fivadiham-pitokiana ny paroasy mpampianatra sy ny fanafahana ho an'izao tontolo izao ny lehibe sy ny mpanapaka. Ny fijangajangana ara-panahy panahy.
Fa ny papa koa dia misy ny lavaka mangitsokitsoka ny fitondran-tena simba. Ny katolika mpisorona matetika Tena mpijangajanga. Manambady no lehibe ny ozona.
Tamin'ny seminera katolika, ny fitondran-tena ny boky fianarana teolojia ny jesuitteolog Alphonsus Maria de Liguori. Boky ity dia manome torolalana amin'ny antsipiriany isan-karazany ny fitondran-tena maloto sy ny fitondran-tena maloto sy ny firaisana ara-nofo fady indrindra.
Ny norvejiana mpanoratra Marta Steinsvik namoaka boky telo-polo taona lasa izay mitondra ny lohateny de Saint Peters Himmelnökler. Misy, dia mampiseho papaly nanana fitondran-tena amin'ny fomba izay nanao ny Katolika mpisorona tena tezitra. Ny boky dia amin'ny ankapobeny ihany ny notsongaina avy amin'ny fitondran-tena indrindra Liguoris teolojia fa koa avy amin'ny hafa Katolika mpanoratra boky. Ireo no noheverina teny nalaina ny sivana toy ny zava-betaveta, fa ampahany lehibe ao amin'ny boky dia feno ranomainty.
Rehefa ny pretra katolika kandidà fahazoana fahalalana momba ny fitondran-tena maloto sy ny faharatsiana ara-nofo, toy ity boky hampianatra tsara, izy ireo dia heverina ho vonona noho ny fanompoany amin'ny confessionals katolika.
Fa tsy omby alinalina ny vehivavy voafitaka ny mpisorona ao amin'ny confessionals, angamba tsy mihoatra noho Andriamanitra matoky. Ny Katolika confessional no loharanom-lehibe ozona ao amin'ny fitondran-tena fanajana noho ny hafa angamba. Ireo izay misalasala ny marina ny filazana voalaza etsy ambony dia afaka mamaky ny boky amin'ny alalan'ny Marta Steinsvik na ny boky hoe Ny mpisorona, ny vehivavy sy ny fanekena an'i Charles Chiniquy, dimam-polo taona izay ny an'ny Eglizy Katolika, ary dia mpisorona tao.
Ilay vehivavy janga lehibe sy ny bibi-dia
Ny biby, rehefa nanamarika teo aloha, ny fanjakana mpanompo sampy. Ao amin'io biby jaky nipetraka mpivaro-tena. Izany dia midika hoe, voalohany indrindra fa ny fitondram-panjakana manohana ny mpivaro-tena fiangonana. Izany dia nanomboka Constantin rehefa nanandratra ny Fiangonana Kristianina, ny fanjakana ny fivavahana, ka tonga tao ambanin'ny fanjakana ny fialofana sy fiarovana. Io no fiangonana lehibe loza. Marina aloha fa nifaranan 'ny fandatsahan-drà fanenjehana avy ao amin'ny Governemanta, fa ny fiangonana koa dia lasa miankina amin'ny fanjakana. Io toerana mampalahelo ny fizarana rehetra tohanan'ny governemanta sy amin'ny lafiny sasany ny fanjakana nitarika ny fiangonana kristianina ny teny Katolika. Taty aoriana, ny papa efa nitsangana mihoatra noho ny fanjakana. Ny fikambanana amin'ny fanjakana dia iray amin'ireo dingana 'ny fiangonana skökoväg ny mampidi-doza.
Fa ny mpivaro-tena mipetraka eo amin'ny biby dia midika ihany koa fa nitady haka ny voa sy hitarika an-tànany ny fanjakana sy ny fahefana mifehy ny sitrapony. Ao amin'ny Eglizy Katolika ny fampandrosoana, hitantsika mazava tsara izany. Ny papa nandray tena ela dia hanolotra ny fandraisana an-tanana ara-politika. Nandritra ny taonjato maro, satria mpanapaka sy emperora nifaninana mba handresy ny papa sy ny fahasoavana sy ny famindram-po papa. Ary matetika ny fiangonana ny fitaovana vonona hanao ny didinao. Ny heriny dia manana Nisy fotoana lehibe toy izany fa samy mpanjaka sy ny mpanjaka efa voarara, raha tsy nety nihaino azy. Maro ny mpanjaka tamin'ny Moyen Âge dia satroboninahitra 'ny Papa. Ny nahazo papa amin'ny zavatra rehetra hery miasa mangina ara-politika lehibe kokoa. Ny hery miasa mangina ara-politika fiangonana no tsy mbola tapitra. Angamba ny heriny mbola ho lehibe lavitra any amin'ny faran'ny fotoana, eo anatrehan'i ny fitsaran'Andriamanitra.
Indray andro, na izany aza, ilay bibi-dia mba hanipy ny nasty mpitaingina azy ny tenany. Avy eo izy öclestimma nokapohina.
Ilay vehivavy janga lehibe sy ny masina.
Tiako mba hanamafisana fa rehefa miresaka momba ny Eglizy Katolika, dia ny rafitra isika miresaka, fa tsy olona. Nisy sy mbola matahotra an'Andriamanitra ny olona ato am-piangonana, ary koa ao amin'ny fiangonana Pentekotista dia mety ho ny olona izay efa latsaka ao skökoliv ara-panahy. Noho izany ny rafitra izahay miresaka momba. "Ary hitako fa, indro, ravehivavy dia leon'ny ny ran'ny olona masina." Ny papa dia nandatsa-dra kokoa ny maritiora noho ny lozabe Emperora romanina niara-. Tombanana ho dimam-polo tapitrisa, fara fahakeliny, maritiora maty nandritra ity fiangonana ity. Ary papa habibiana mifandray amin'ny olo-masina maro sy ny maritiora any amin'ny Néron Mpanjaka anisan'izany ny habibiana ao amin'ny alokaloka.
Inkvisationen any Moyen-Âge sy ny fitaovana fampijaliana, no anankiray amin'ny tena devoly, noforonina ny fijaliana ny hafa. Tsy afa-po izy ireo amin'ny famonoana ny niharam-boina fotsiny. Alohan'ny fahafatesana dia tonga tahaka ny mpanafaka, maro ireo maintsy masina ny direst fampijaliana. Fitsarana Katolika lavaka dia hay faritana mahatsiravina. Indrindra fa ny Espaniola inkvisationen efa nahazo laza mihoson-drà. Inkvisationsdomstolarnas mpikambana notendren'ny Papa.
Ny Eglizy Katolika no akaikin'ny ankehitriny nandà tsy ara-teorika na tamin'ny fomba ofisialy nanafoana ny Fitsarana Katolika. Inkvisitionskongregationen nyorganiserades tamin'ny 1908, ary mbola voalohany amin'ny fiangonana rehetra ity fiangonana ity. Ny Papa mihitsy no andrim-panjakana ity Mpiadidy. Izany, hoy ny maro momba ny fiangonana ny toe-tsaina amin'ny olona izy ireo hoe mpivadi-pinoana.
Ny vehivavy janga dia nisotro ny ran'ny olona masina.
Mpivaro-tena lehibe izy ireo
Izany lalàna no tena ampiharina ny biby ihany, nitondra azy teo aloha. Ao Rosia, efa hitanay ny fomba mena governemanta kaominista namabo ny Eglizy Ortodoksa, ary efa ho torotoro tanteraka azy. Toy izany koa no imbetsaka Taona vitsy taty aoriana any Meksika. Amin'ny alalan'ny ohatra ireo mba hahazo an-tsaina ny fomba handeha rehefa vilcldjuret miaraka amin'ny mpanjakan'ny tany dia "hankahala ilay vehivavy janga, ka hahatonga azy ho lao sy mitanjaka, ary hihinana ny nofony ary handevona ny tenany amin'ny afo" (Apokalypsy 17: 16 b).
Indray andro ny fanjakana dia ahintsano ny fiangonana rehetra ny fitarihan'ny, ary mba hitondra azy kosa izy, dia ho Malahelo be azy.
Ao amin'ny Apokalypsy toko faha-fahavalo ambin'ny folo nanao mpivaro-tena sy Babylona Lehibe toy ny mitovy dika hevitra. Izany no nahavery hevitra ny sasany. Ataoko fa dia iray ihany izany tahan'ny tahaka ny ampakarina sy ny Jerosalema Vaovao dia voaomana tahaka ny toy izany. Midika izany fa ny tsara i Jerosalema Vaovao no ampakarina an-trano ny mandrakizay, raha ny mpivaro-tena monina any Babylona Lehibe. Tany no mipetraka toy ny mpanjakavavy, ary ny fanahy Babela ny fananany izy. Avy eo, rehefa mandeha Babylona Lehibe ambany, ihany koa ny mpivaro-tena eo amin'ny fitsarana marin'Andriamanitra.
Ankoatra an'ireo mampalahelo mampiseho ny vehivavy janga lehibe, fampitandremana famantarana feo avy any an-danitra.
"Ary nahare feo iray koa tany an-danitra hoe:
Mialà aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy handraisanareo ny loza manjo azy. " (Apokalypsy 18: 4).
Mivoaha rehetra skökoväsen ara-panahy!
Izahay dia tena akaiky tokoa ny fotoana ny fitsarana ny vehivavy janga fiangonana dia tokony hampiharina. Araka ny fantatsika ihany koa, fa ny fotoana dia manakaiky ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Enga anie isika ka ho unswervingly any an-danitra amim-pinoana ny Mpampakatra, ka Faly izahay hitsena azy, raha avy!
Ho avy tsy ho ela izy! Aoka ianao ho vonona!